Amagama Ezinja angama-250: Uhlu Lokugcina Lwama-AZ lwamagama amahle kakhulu wezinja - Amagama Ezinja
Uma ucabanga ukuthola inja , lapho-ke kufanele ukuthi uyazibuza ukuthi ungalithola kanjani igama lenja elihle kakhulu kumngani wakho we-canine?
Ukuletha i-pooch ekhaya emndenini wakho kungenye yezinto ezithokozisa kakhulu futhi ezimangalisayo.
Ama-canine aphilile owaziwa njengomngani omkhulu womuntu , futhi uma ungumnikazi we-canine emangalisayo, siyaqiniseka ukuthi uzovuma.
Ubuntu babo obungakholeki, ukubukeka okuhle nokuhlukahluka nobumnene bobungane kubenza babe yizilwane ezifuywayo ezimangalisayo, ezifanelwe amagama amangalisayo ukufanisa!
Ngakho-ke sihlanganise amagama angama-250 wezinja ezinhle kakhulu, ukuhambisana nazo zonke izinhlobo zama-canines ... kusuka kumaLabradors kuye kumaPugs!
Siyaqiniseka ukuthi uzothola eyodwa evumelana ne-pooch yakho ngayinye, inhlanhla futhi ujabulele ukuhlola lawa magama amahle!
Amagama Ezinja Nezincazelo
Amagama ezinja zesifazane
Amagama ezinja zesilisa
Amagama Enja Emisha
Amagama wezinja ahlukile
Amagama Ezinja Apholile
Amagama wezinja amahle kakhulu
URufus Igama lesidlaliso lesilisa okuyinketho ethandwa kakhulu nenhle ye-canine yesilisa. Kungokudabuka kwaseRoma futhi kusho ukuthi 'onezinwele ezibomvu' ngesiLatini. Kungani ungasebenzisi lokhu ukuthola i-russet-toned pooch?
UFlora Noma ngubani ofuna ukukhetha okukhazimulayo, okwesifazane kanye nokwemvelo uzolithanda ngempela leli gama laseYurophu. Kuqhamuka egameni lesiLatini elisho 'imbali', futhi sicabanga ukuthi ilungele iphuphu lesifazane elithanda imvelo, noma eligijimayo nje ezinkambu.
UFido Ungase ukwazi lokhu njengokukhetha okuvamile kwesilwane sakho. IsiLatini esithi 'ukwethembeka', esifanele umngani wakho omkhulu, kubuye kube igama elifanayo le-canine yesilwane esifuywayo sika-Abraham Lincoln. Lesi ngesinye isizathu sokuthi kungani sithandwa kakhulu yizinja emhlabeni jikelele.
UNora Le moniker e-funky ne-quirky iyindlela enhle yezinja zesifazane ezinamabhakede obuntu! Kuyindlela efinyeziwe ye-'Eleanora ', okusho ngesiGreki ukuthi' ukukhanya'- mhlawumbe kuhle ngelebhu ephuzi?
Inyanga Kanye nokuba yisinqumo esihle kakhulu, inekhwalithi eyengeziwe ye-nerdy kulabo abangabalandeli abathandekayo bochungechunge lweHarry Potter! Igama lesiLatini elisho ‘inyanga’, ngakho-ke lingathandwa yizinja ezinamajazi amhlophe noma aphuzi.
Ipancake Bekulokhu kuthandwa njalo ukubuka ukudla kokukhuthazeka lapho uqamba izilwane ezifuywayo. Kungani unganiki i-pup yakho igama lokudla ngemuva kwalokhu kudla kwasekuseni okumnandi futhi okumnandi?
UMilo Sithandane nale nketho emnene kodwa yesilisa. Leli gama elithandekayo empeleni linomsuka waseJalimane futhi lisho ukuthi 'isosha, unesihe'. Kungenzeka ukuthi usuvele uyayithanda le nketho uma ungumlandeli weDisney's Atlantis: The Lost Empire, lapho uMilo kuyigama le-protagonist.
UDarwin Lokhu kukhethwa okungajwayelekile kusho ukuthi 'umngane othandekayo', okulungele noma iyiphi i-pet pooch ethandekayo. Lesi sidlaliso futhi siyisinqumo esihle kulabo abanentshisekelo kuCharles Darwin, umsunguli wemfundiso yokuziphendukela kwemvelo. UDarwin uyinketho eyingqayizivele futhi eyinqaba, enencazelo enhle.
I-Opal Uma i-canine yakho inamehlo agqamile futhi ayindida, kungumqondo omuhle ukuwashayela ngemuva kwetshe eliyigugu lokulutha. Ama-opals ayamangalisa ngokwemvelo futhi angavela ngemibala ehlukahlukene emihle, ngakho-ke ukuqamba igama lakho ngemuva kwabo kukhokha ubuhle babo!
Sage Leli gama elizwelayo elifushane nelithambile liphelele kulabo abafuna ukukhetha okukhuthazeke ngokwemvelo. I-Sage futhi kungenye inketho kulabo abahlakaniphe ngendlela eyisimanga nezifundiswa.
Gandalf Abalandeli beNkosi yeThe Rings bazolazi kahle leli gama eliyinganekwane. Yigama lesilekeleli esinamandla, futhi sizoba sithandwa kunoma yibaphi abanikazi bezinja abanomdlandla nabathanda izincwadi. Ukulungela izinja ezimpunga noma ezimhlophe, njengoba uGandalf uGrey ebuya njengoGandalf the White.
USandy Siyayithanda le moniker efudumele futhi ethandekayo yama-pooches. Akukona ukukhetha okuhle kuphela ngezinja ezinemibala e-blonde noma ephuzi, kepha futhi ilungele ama-canine anomusa wobungani nemvelo enothando.
Kubolile Ngabe kukhona ukukhetha okungcono kwegama lenja enemibala yethusi? Lokhu akuyona into enhle kuphela, kodwa futhi kupakisha nesibhakela samahlaya! Ukuqamba isilwane sakho ngokuthi Rusty kunika wonke umuntu umqondo wokuthi uyisilima futhi uyamnandi.
UMelvin Siyasithanda ngempela lesi sidlaliso esizwakala kabi nesingajwayelekile. Inemvelaphi yamaCeltic futhi isho ukuthi 'umholi noma inkosi', okuyinto enhle uma ingane yakho icabanga ukuthi iphethe ikhaya. Sicabanga nokuthi leli gama lenja lizwakala kahle, ngakho-ke kungasebenza kahle kulo inja enobumnene .
UFeliksi Leli gama liyaheha ngempela futhi liyingqayizivele, futhi sicabanga ukuthi kungakuhle isilwane. Felix imvelaphi yegama lokuqala. Uma i-pooch yakho ijabule futhi i-bouncy, khona-ke le quirky ingaba yisinqumo esihle.
Pearl Leli gama eliyigugu liyisinqumo esimnandi nesabesifazane sanoma imuphi umdlwane. Sicabanga ukuthi leli gama lingahle lithande i-canine encane futhi emhlophe, njengeparele! UPearl uyitshe lokuzalwa ngoJuni. Uma unomdlwane wasehlobo, kungani ungamqambi ngaleli gugu eliyigugu?
Odin Uma ufuna i-moniker ecebile ngesiko lamaNorse, khona-ke sincoma impela lokhu kukhetha okuqinile nokwesilisa. U-Odin ungunkulunkulu wempi waseNorse, izinkondlo, ukufa namasiko. Vele, ungahle uthande ukungazinaki noma iziphi izincazelo ezingezinhle zale nketho, ngaphandle kokuthi i-canine yakho inkulu impela futhi iyabukeka !
Poppy Amagama ezimbali aya ngokuya ethandwa ngokwengeziwe ezinganeni nasezifuyweni. Ama-poppies anombala obomvu ogqamile, ngakho-ke ungakhetha leli gama lenja uma isilwane sakho sinamathoni we-ginger noma we-copper.
Okuluhlaza okwesibhakabhaka okukhanyayo Inketho ethandwayo yabathanda isikhala, ngakho-ke kungani ungahambeli lokhu kukhetha okunomusa nokumsulwa? Kusuka kwimvelaphi yesiLatin futhi kusho ukuthi 'kwezulu', sicabanga ukuthi lokhu kukhetha okuhle kuhle kuma-canine aziphethe kahle nawezingelosi.
USeti Le moniker enhle, emfushane ingukukhetha kakhulu kwe-poplar ezinganeni nakuma-canine! USeth uvela eBhayibhelini futhi uhlotshaniswa nezilwane eziningi, ngakho-ke kungani ungasebenzisi i-pooch yakho? Sicabanga ukuthi lokhu kuzoba kuhle ukuthola i-pooch ehamba kalula nesineke.
AmaMittens Noma yisiphi isilwane esinokumakwa ezinqeni zaso kuyisinqumo esihle saleli gama elihle lenja. Kubuye kube ukukhetha okuhle kunoma iyiphi inja ngejazi elifudumele futhi elifudumele , noma nje umdlwane othanda ukuhaqwa!
UMario Igama lomfana wase-Italiya lakudala, futhi kuyindlela enhle kunoma ngubani othanda iNintendo. Leli igama lomunye wabadumile uMario Bros, njengoba noma yimuphi umdlali azokwazi! Lokhu kungaba yisinqumo esihle uma ufuna ukukhothamela imidlalo yevidiyo.
I-Pecan Leli gama lenja liyisinqumo esihle sanoma iyiphi i-canine enengubo ecebile ensundu. Ama-Pecans avame ukusetshenziselwa uswidi we-praline, ngakho-ke lokhu kuyindlela enhle yesilwane esiluphekelo oluhle oluqinisekisiwe!
Inzondo Ungase ukwazi lokhu njengegama lomngane we-canine oqanjiwe kaGarfield. Lokhu kusho ukuthi kuyindlela yakudala futhi ethandwayo yanoma yisiphi isilwane. Ngemvelaphi yesiNgisi kuhlotshaniswa namagquma nezintaba. Uma ufuna igama lemvelo, khona-ke lokhu kungaba ukukhetha okuhle.
U-Ezra Leli gama lenja lizwakala kakhulu manje futhi liyindida, kepha empeleni lidala kakhulu. Kuyinto yesiHeberu ethi 'umsizi', ngakho-ke kungaba yindlela efanelekile kunoma iyiphi i-pooch eyenza umngane omuhle.
Ukuthola igama eliphelele le-pooch yakho yesifazane kuwumsebenzi olula uma ufuna ugqozi ezindaweni ezifanele!
Izici ezinhle zemvelo, njengezimbali nemibala zenza amanye amagama ezinja zesifazane ezihamba phambili; lezi zinto ezimangazayo zifanisa ubuhle nokuzimela kwezilwane ezifuywayo!
Sifake amanye amagama ezinja athandwa kakhulu emhlabeni, afana no-‘Bella ’no-‘Poppy’, kanye namanye amagama ayivelakancane futhi ayingqayizivele afana ne-‘Apple ’ne-‘Nessa’.
Uma ufuna okuthile okungajwayelekile, ukuze uvumelane nohlobo oluthile lwe-pooch, siyethemba ukuthi uzokuthola ohlwini olungezansi ...
U-Aggie - ufushane ngo-'Agatha '
I-Amber - ngemuva kwetshe eliyigugu elihle, eliwolintshi
Annie - Hebrew okusho ‘umthandazo’
I-Apple - ngemuva kwesithelo esimnandi nesiphundu!
UBella - ufushane ngo-'Arabella 'noma u-'Isabella'
ICaramel - enhle, i-canine enemibala ye-caramel
I-Clover - ngemuva kwembali yasendle
I-Gracie - inguqulo enhle ye-'Grace '
UJosie - inguqulo efushanisiwe ka ‘Josephine’
Lily - ngemuva kwembali emhlophe
UMaggie - ufushane ngo-‘Margaret ’
UMarnie - isiHeberu okusho ukuthi 'ukujabula'
UNessa - ufushane ngo-‘Vanessa ’
U-Olivia - igama lesiLatini elisho ukuthi 'umnqumo'
UPoppy - ngemuva kwembali enhle
Sadie - Hebrew okusho ukuthi 'princess'
UTilly - mfushane ngo-‘Matilda ’
I-Violet - ngemuva kombala ogqamile
I-Willow - igama lesiJalimane okusho ukuthi 'ukuthula'
Zoe - Greek okusho 'impilo'
Izinja zesilisa zaziwa ngemvelo yazo eqinile, ngaphezu kwe ukubukeka kwabo okuhle futhi abantu abathandekayo !
Ukuthola amagama ezinja afaka zonke lezi zinto kungazwakala njengenselelo, kepha sikholwa ukuthi uhlu lwethu luqukethe amagama akhombisa ngokunembile izinto ezinhle ngama-canines!
'I-Pippin' ingafushaniswa ithi 'Pip', ilungele isilwane esihle!
I-'Bhele 'yinhle ngokubukisa ngezimfanelo zobuqili zama-canine
‘Ithangi’ liyakhombisa amandla namandla ezinja zesilisa !
Sithemba ukuthi uzithanda iziphakamiso zethu njengoba senza:
I-Ace - isiLatini esisho ‘ubunye’
I-Bear - ngemuva kwezilwane ezinkulu ezinoboya
IBruiser - kakhulu igama lezinja elidumile
UCeddy - ushoda ngo-'Cedric 'othandekayo, owenziwa waduma nguJ. K. Rowling
UCoby - igama elithandekayo lomngane onoboya
Cooper - IsiNgisi sokwenza umgqomo
UDanny - ufushane ngo-'Daniel '
UDexter - isiLatini esisho ukuthi 'kwesokudla'
UDuke - uphelele isilwane esihle
I-Finn - isiNgisi esisho ukuthi 'blond'
IGizmo - okusho ‘amagajethi’
UJasper - igama lesiPheresiya elisho ‘umgcinimafa’
UJax - mfushane ngo-'Jackson '
Leo - Latin okusho ukuthi 'Lion'
Loki - ngemuva uNkulunkulu waseNorse wokubhujiswa
Inhlanhla - yesilwane okuyi-charm yakho yenhlanhla
U-Oliver - noma u-'Ollie 'ngamafuphi
I-Pippin - noma i-'Pip 'ngamafuphi
USimba - ngemuva kwengonyama evela ku-Disney's 'The Lion King'
I-Tank - ilungele i-canine enkulu, negama elihlekisayo le-pooch encane!
UZeus - ngemuva kukayise ongumGreki wonkulunkulu nabantu
Inja esike kakhulu emhlabeni amagama angatholakala noma kuphi: kusuka kumafilimu nezincwadi, kuya kumagama asebukhosini namagama anencazelo ethandekayo!
Sincoma ukunciphisa amagama, anjengokuthi 'Theodore' kuya ku 'Theo', noma ukufaka umsindo u-'e 'ekugcineni, njengo-'Joey' ... lawa avamise ukwenza amagama ezinja asikwe kakhulu athandwa yibo bonke abantu!
Qiniseka ukuthi uyazi incazelo yegama elihle ngaphambi kokulinikeza ku-pooch yakho ethandekayo , njengoba amanye amagama abonakala ezwakala futhi ebukeka emuhle, anezincazelo ezikhohlisayo eziphikisana nobuntu obuthandekayo besilwane sakho!
Sikholelwa ukuthi amagama ethu ezinja anenhlanganisela ephelele yokusika, nezincazelo ezinhle ngemuva kwawo, ngakho-ke jabulela ukuzihlola!
Abby - American meaning 'one who gives injabulo'
Adela - igama elihle lesiFulentshi okusho ukuthi 'one-good humor'
I-Axel - okusho ‘ubaba wokuthula’
UCaleb - okusho ukuthi ‘othembekile’
UFinian - okusho ukuthi 'one handsome'
UFletcher - isiNgisi okusho ukuthi 'umenzi womcibisholo'
UHerbie - igama lesiJalimane elisho ukuthi 'iqhawe elikhuthele'
Logan - okusho ukuthi ‘idlelo’
Lottie - mfushane ngo-'Charlotte '
UMarley - ngemuva kwesilwane esithandekayo esivela ku-'Marley and Me '
UNowa - okusho ukuthi 'onokuthula', uphelele ngenja ebandayo
Parker - English okusho ‘park keeper’
INkosana - igama elihle lesilwane sasebukhosini
I-Queenie - i-moniker yasebukhosini
URory - Isi-Irish esisho ‘obomvu’
I-Rusty - ilungele i-pooch enoboya obunemibala yokugqwala
UTeddy - igama elihle okwe-pooch cuddly
UToby - igama le-protagonist kusuka kwifilimu ka-2017 ethi 'Inhloso Yenja'
Theodore - okusho ukuthi 'isipho sikaNkulunkulu' ngesiGreki, 'Theo' ngamafuphi
I-Wispa - ngemuva kwebha yetshokholethi yaseCadbury
Uma ngabe inja ivelela esixukwini , noma ngabe kungenxa yobuntu babo obungasile, ukubukeka okuhlukile noma indlela yokuhamba eyisimanga, badinga igama elihlukile elizolingana nabo!
Vayizisa amagama ama-canine wakudala, bese wamukela amagama amasha namanga okungenzeka awukaze uzwe ngawo ngaphambili!
Lapho abantu bezwa igama eliyingqayizivele lesilwane sakho sasekhaya, ufuna ukuthi bathande, bese babuza incazelo ngemuva kwaso, ngakho-ke qiniseka ukuthi i-moniker oyikhethayo inencazelo eyingqayizivele futhi ekhethekile ngokufana nayo!
Zama ukuhlanganisa amagama amabili ukuze wenze inhlanganisela enhle nehlukile, njenge-'Abrielle '.
Noma zama ukuthola amagama ngezilimi ezipholile ezifana nesiHindi, isiHeberu nesiGreki, njengoba lawa magama azokwenza umngani wakho onoboya avelele kuzo zonke ezinye iziqiwu ezisepaki!
Abrielle - inhlanganisela epholile 'uGabrielle' no 'Ariel'
I-Ahuva - isiHeberu okusho ukuthi 'umuntu othandekayo'
Eero - IsiFinnish sisho ukuthi 'umuntu obusa ingunaphakade'
U-Eeva - isipelingi esiyingqayizivele segama lesiHeberu elithi 'Eva', elisho 'impilo'
Eleta - Latin okusho ukuthi 'one who is selected'
UGergo - igama eliyingqayizivele lesiHungary elisho ‘ukubukela’
IGilit - inhle nge-pooch ethanda ubumnandi, okusho ukuthi 'injabulo yaphakade' ngolimi lwesiHeberu
Hestia - ngemuva unkulunkulukazi Greek of eziko nasekhaya
I-Leona - isiFulentshi esisho ukuthi 'ibhubesikazi'
ULichas - ngemuva kwenceku kaHeracles evela ezinganekwaneni zamaGrikhi
UMerek - igama lesiTeutonic elisho ukuthi 'obusa ngamandla'
INejma - isi-Arabhu esisho ‘inkanyezi’
UNyssa - i-moniker yesiGreki eyi-quirky esho ukuthi 'i-elf enobungane', igama elifanele lenja emnandi nencane!
U-Oana - isiteketiso saseRomania esisho ukuthi 'uNkulunkulu unomusa'
I-Parisa - incazelo enhle nehlukile 'umuntu ofana nenganekwane'
USalome - osetshenziswe nguShakespeare emdlalweni wakhe
UWeslyn - isiJalimane esisho ukuthi 'ukuvikela iqhawe', le nja ingabizwa ngokuthi 'Wes' ngamafuphi
I-Yigal - inguqulo yase-Ukraine yegama elithi 'Eve', okusho ukuthi 'impilo'
UZabi - igama elimnandi elifushane ngo-'Zabdiel '
I-Zephyr - isiGreki esisho ukuthi 'impilo kaZeus'
Uma inja yakho iyi-pooch ebanda kunazo zonke ebhlokini, futhi igama lenja yendabuko bekungeke nje kubafanele, bese ubheka igama elipholile esikhundleni salokho kuwumqondo omuhle!
Senze uhlu lwamagama wezinja apholile kunawo wonke, kufaka phakathi amagama apholile avela kumafilimu nezinhlelo ze-TV kanye namagama ngokuvamile avele aqoqe isibhakela!
Igama elithi 'cool' lisho izinto ezihlukile kubanikazi abahlukahlukene be-canine, kepha sethemba ukuthi uyavuma ukuthi amagama angezansi angafanela ezinye zezilwane ezifuywa kakhulu emhlabeni ...
U-Althea - ngemuva kukankulunkulukazi weqiniso wasenganekwaneni wamaGrikhi
I-Alva - isiJalimane esisho ukuthi 'mhlophe'
I-Atom - ngemuva kwezinhlayiya ezincane
Baloo - kusuka IDisney ethi ‘The Jungle Book’
IBolt - evela kwifilimu yeDisney
I-Eagan - okusho ukuthi isi-Irish 'somlilo', ilungele i-canine enezikhwama zobuntu!
Fuzzy - ephelele isilwane esinoboya obungaqondakali !
Isiphepho - se i-pooch yasendle futhi esebenzayo
Iona - igama elingu-unisex, ngemuva kwenkosi edumile yaseFrance
I-Knight - ilungele i-canine enhle
I-Lapis - ngemuva kwetshe eliyigugu elihlaza okwesibhakabhaka eligqokwa njengobucwebe
Latif - okusho ukuthi 'onomusa futhi omnene'!
IMada - isifinyezo esipholile sika ‘Matilda’
INava - okusho ukuthi 'muhle' futhi 'uyathandeka', ilungele isilwane esipholile futhi esihle
I-Nitro - isifushane nge-elementi ethi 'Nitrogen'
U-Orion - ngemuva kwendodana yomlilo yamaGrikhi
Inhlansi - yesilwane esiphilayo!
Ura - Umsuka weSanskrit, okusho ukuthi 'itshe eliyigugu'
I-Wikolia - epholile futhi emnandi isho ukuthi 'lowo odumile empini'
IZowari - ngemuva kwedolobha lasendulo lesigodi saseJordani
UZuma - oqhamuka kwabanopopayi Uchungechunge lwe-TV PAW Patrol
Sikholelwa ukuthi amagama ezinja angcono kakhulu athandwa kakhulu, ngoba kufanele kube nesizathu sokuthi kungani abanikazi bezinja abaningi bekhetha bona.
Lawa magama afanele zonke izinhlobo zezinja , futhi iphelele kunoma yisiphi isayizi, umbala noma ubumnene.
Akuwona nje kuphela lawa magama ezinja athandeka kakhulu, futhi anezincazelo ezinhle nezinhlobonhlobo ngemuva kwawo ...
... ngakho-ke zama ukufanisa incazelo ne-pooch yakho ukuthola igama elikulungele kakhulu.
I-Archie - isiNgisi esisho 'isibindi' futhi 'okwangempela'
I-Bailey - leli gama le-unisex igama elidumile kuwo wonke ama-canine ngokufanayo!
UBuddy - uphelele isilwane esingumngane wakho omkhulu
IBuster - igama lenja yakudala
UCoco - ngemuva komklami wemfashini odumile ‘Coco Chanel’
UFrankie - ufushane ngo-'Francesca '
Lola - Yinhle ngegama lomdlwane !
Lucy - Latin okusho ‘ukukhanya’
Luna - okusho ‘inyanga’ ngesiLatini
UMax - ufushane ngo-'Maximillian ', okusho ukuthi' omkhulu kunabo bonke '
UMillie - okusho isiJalimane 'ukushayela' kanye 'nokuzimisela'
UMilo - okusho ‘umbhubhisi’
UMindy - mfushane ngo-‘Melinda ’
Misty - igama elihle futhi eliyimfihlakalo le-canine eyigugu
UMolly - igama elijwayelekile
UMonty - ufushane ngo-‘Montgomery ’
UNala - kusuka ku-Disney's 'The Lion King'
Oscar - okusho ukuthi 'umngani wezinyamazane'
I-Rocky - ilungele umngane onzima onoboya!
URosie - inguqulo enhle yegama elithi 'Rose'
I-Toffee - ilungele isilwane esinoboya obumbala we-toffee!
Futhi lokho kuphetha uhlu lwethu lwamagama ezinja kuzo zonke izinhlobo zenja!
Sithemba ukuthi ukuthokozele ukuhlola imibono yethu futhi uthole igama elifanele lomdlwane wakho ophelele.
Ukukhetha igama lesilwane sakho esisha kungabonakala njengenselelo enkulu kakhulu, ikakhulukazi uma lesi kuyisilwane sakho sokuqala.
Ngethemba ukuthi lolu hlu lokukhetha luzonikeza ugqozi olukhulu futhi lwenze isinqumo sibe lula kakhulu kuwe.
Sazise uma ngabe usebenzise amanye amagama kulolu hlu.
Sithanda nokuzwa noma iziphi ezinye iziphakamiso ongahle ube nazo ngamagama amakhulu ezinja.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi iyini inja yaseFrenchton?
i-german Shepherd lab retriever mix
labrador exutshwe nemidlwane ye-pitbull
izinhlobo ezahlukahlukene zamashadi we-pitbulls